Github တွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး PR (Pest Request) | FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ChrisADR | | GNU / Linux များ, အခြား
ကောင်းပြီ၊ ငါသက်သောင့်သက်သာအနားယူရာဇုန်မှထွက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်၏သက်သောင့်သက်သာဇုန်များထဲမှတစ်ခုသို့သွားရန်လွတ်လပ်မှုကိုအနည်းငယ်ယူမည်။ 😛 FOSS။ Gentoo နဲ့လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးဒီ post မှာတော့ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ကိုမျှဝေရန်နှင့်စီမံကိန်းများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကမ္ဘာတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပြည့်အဝနှစ်မြှုပ်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့အနည်းငယ်ကြိုးစားပါမယ်။ နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ရဲ့ဖွင့်ကြကုန်အံ့:
3.1 code ဖတ်တာကသင့်ကိုပရိုဂရမ်မာပိုကောင်းစေတယ်
4 ပြီးတော့ ... ငါပရိုဂရမ်မာမဟုတ်ရင်ကော။
5 ကျွန်ုပ်မည်သို့ပါ ၀ င်ပါသလဲ။
5.4 IRC / Gitter / ကြေးနန်း
6 ငါ့ရဲ့ပထမဆုံး PR
6.2 non-programmer အဖြစ်
အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ (ယင်း၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်အတွက်) သည်၎င်းသည်လက်ရှိဖြစ်သည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစီမံကိန်းများပါ ၀ င်သည်။ ငါထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်များကိုဆွေးနွေးရန်ဟန်ဆောင်။ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိသည့်စီမံကိန်းစာရင်းတစ်ခုမှငါ့ကိုစာတိုက်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည့် Mr. Stallman အားအရာရာအားလုံးရှင်းပြရန်ပင်တခါပင်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပြီးသင်နှင့်အတူမျှဝေတော့မယ့်ဆောင်းပါးတပုဒ်ဟာတရားဝင် GNU ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရှိတယ်၊ စာတမ်းအတော်များများလိုပဲ၊ သူတို့ကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ဆိုထားတယ်။ ငါ link ကိုပူးတွဲပါနှင့်ငါအများဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သောအပိုဒ်များထဲမှကိုးကားလွတ်လပ်ခွင့်ယူပါလိမ့်မယ်။
ကျောင်းများတွင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်မှာကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပညာရေးဖြစ်သည်။ ကျောင်းများသည်အခြေခံအချက်အလက်များနှင့်အသုံးဝင်သောစွမ်းရည်များသင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သော်လည်း၎င်းသည်သူတို့၏အခန်းကဏ္ part ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျောင်းများ၏အခြေခံမှာအခြားသူများအားကူညီခြင်းအလေ့အထအပါအ ၀ င်နိုင်ငံသားကောင်းကိုသင်ကြားရန်ဖြစ်သည်။ တွက်ချက်ခြင်းတွင်၎င်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲများမျှဝေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နေ့ကလေးထိန်းဌာနမှစတင်သောကျောင်းများသည်ကျောင်းသားများအားဤသို့ပြောသင့်သည် -“ အကယ်၍ သင်ကျောင်းသို့ဆော့ (ဖ်) ဝဲထည့်လိုက်ရင်၊ အခြားကလေးများနှင့်မျှဝေသင့်သည်။ ပြီးတော့တစ်ယောက်ယောက်ကလေ့လာချင်ရင် source မှာ class ကိုပြသင့်တယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရန်မဟုတ်ပါက၊ အခမဲ့မဟုတ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုကျောင်းသို့ယူဆောင်လာရန်ခွင့်မပြုပါ။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်နည်းပညာထက်ပိုသောစီးကြောင်းဖြစ်သည်၊။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်မာနထောင်လွှားခြင်းတို့သည်အခြားသူများကိုအမှန်တကယ်ဝေမျှ။ ဂရုစိုက်သောသူများရှိနိုင်သည့်ဤလောကနှင့်တစ်လှမ်းပိုမိုနီးကပ်လာခြင်းနှင့်တူသည်။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသုံးပြုသူများကိုမရည်ရွယ်ပါ။ သို့သော်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြတ်ပြီး၎င်းတို့ကိုမည်ကဲ့သို့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။
ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် (သို့) အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြစ်စေ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားလုံးတွင်စီမံကိန်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်လည်ပတ်နေသည့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာများသည်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းစီမံကိန်းကြီးလေလေတည်ဆောက်ပုံများသည်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပုံစံများပိုမိုတိကျစွာဖြစ်လာသည်။ ပါဝင်သူအရေအတွက်များလေလေမှားယွင်းမှုများကိုကောင်းစွာနားမလည်ပါကလုပ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်လုပ်ရန်ဖြစ်စဉ်များသတ်မှတ်သည်။
FOSS ပရိုဂရမ်ကိုပံ့ပိုးရန်ရွေးချယ်သောအခါအဓိကကျသည့်စည်းကမ်းဖြစ်သည် USAR အစီအစဉ်ကဆိုသည် 😀ပြီးတော့ငါပြောတာဟာနည်းနည်းတော့မိုက်မဲနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ဘယ်လောက်များများလဲ အင်္ဂါရပ်များ ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှာဘာတွေပါဝင်သလဲ။ ကောင်းပြီလိုအပ်ချက်ထဲက။ တစ်ခုချင်းစီကိုရှိပြီးသားလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး (လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်များစွာသော) ကဒီ function လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုနှင့်သင်မျှဝေပြီးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လိုပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးပြုမှု သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။
ရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ဒီအပိုင်းကိုစချင်တယ်။ ဘယ်လိုတ ဦး တည်းကျွမ်းကျင်သူပရိုဂရမ်မာဖြစ်လာသလဲ ဒီမှာတချို့ကပြောလိမ့်မယ် ကောင်းကောင်းကုဒ်ရေးသားခြင်းဒီလူတွေကိုလူတွေကိုငါပြောတာကမှန်ကန်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်?
ဆက်မလုပ်မီဤအကြောင်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပါ။ ဘယ်လိုစာရေးရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲမွေးဖွားလာတဲ့ဘာစာရေးဆရာလဲ။ ဦး ဆုံးဖတ်ရန်၊ အခြားစာရေးဆရာများနှင့် ဦး နှောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အကြောင်းအရာနှင့်တန်ဖိုးများဖြင့်တစ်ခုခုကိုစတင်ရေးသားနိုင်မည်မဟုတ်လော။ code တွေနဲ့အတူတူပဲ၊ စာမဖတ်ခင်စာဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ် ရေးသားဖို့။
နှစ်ပေါင်းများစွာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူများအတွက်စိတ်မကောင်းပါ၊ ဤအရာများဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အချိန်ကာလတစ်ခုလုံးတွင်သူတို့ရရှိခဲ့သောအရာများအပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါကစိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော်မှန်ပါသည်။ တကယ့်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများတွင်ပူးပေါင်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်တန်ဖိုးထားနိုင်သည့်အရာတစ်ခုမှာထက် ပို၍ အရည်အချင်းရှိသောလူများစွာရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကဒီဟာကအားနည်းချက်ဖြစ်မယ့်အစားစီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့တာကသင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
သင်၏ကုဒ်ကိုနေ့စဉ်ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ရာနှင့်ချီသောမျက်လုံးများရှိခြင်းကသင်၏ယုတ္တိဗေဒသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သည့်ကဏ္aspectsများကိုရှာဖွေစေသည်။ ၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏ ဦး နှောက်သည်ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသင်၏ပါဝင်မှုအစတွင်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သော "ကလေးဆန်သော" အမှားများသည်မရေရာသည့်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လာသည်။
ဤအရာကိုဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စီမံကိန်းတစ်ခုသည်သင့်အတွက်ကောင်းသည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြည့်လိုသည်၊ စာဖတ်တတ်ရန်နှင့်ကုဒ်ရေးရန်သင်ယူရန်နှစ် ဦး စလုံးသည်ရေရှည်တွင်သင့်အား ကျွမ်းကျင်သူပရိုဂရမ်မာ
ပြီးတော့ ... ငါပရိုဂရမ်မာမဟုတ်ရင်ကော။
လူအများစုက code မရေးဘူးဆိုရင်သင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့လူအများကထင်မြင်ကြသည်။ ဒါကကျွန်မထိတွေ့ချင်တဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်မြို့ပြအပျက်အစီးအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းတော်တော်များများသည်ကုဒ်ထုတ်လုပ်ရန်လုပ်သည်ထက်ကုဒ်မဟုတ်သောအကြောင်းအရာများအတွက်လုပ်သားအင်အားလိုအပ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဒါမှမဟုတ်ကြော်ငြာ, ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေ, ဖြစ်ရပ်စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်, အကူအညီအမြဲကြိုဆိုသည်။ သင်သည်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုခြင်းအပြင်ဤစီမံကိန်းများ၌ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်သင်သည်အတွေးအခေါ်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အတွေ့အကြုံအသစ်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်မည်သို့ပါ ၀ င်ပါသလဲ။
ကောင်းပြီ။ မင်းဒီမှာရှိနေပြီဆိုရင် FOSS စီမံကိန်းမှာပါ ၀ င်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးသိချင်စိတ်ကမင်းကိုကိုက်လိမ့်မယ်။ စတင်ရန်စီမံကိန်းနှင့်ရပ်ရွာတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များတွင်အတူတကွစုစည်းပြီးအခြားသူများနှင့်ကွဲလွဲမှုများရှိသော်လည်းအဆုံးတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပထမရည်ညွှန်းချက်သည်အစီအစဉ်၏လူထုဖြစ်သည်။ သင်အသုံးပြုသည်.
တစ်ခုချင်းစီကိုဝဘ်စာမျက်နှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပိုင်းရှိပါတယ် ပံ့ပိုးသည်။ သင်၌မရှိလျှင်၎င်းသည်သင်ပထမ ဦး ဆုံးကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ 😀ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း၊ ရပ်ရွာနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်စာသားအတိုတစ်ခုကိုရေးခြင်းဖြင့်အခြားသူများကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ they ၎င်းတို့တွင်တစ်ခုရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါက၎င်းသည်မရှိပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကတနင်္ဂနွေကိုဘာသာပြန်ဖို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းရဲ့ပရောဂျက်ကိုကူညီမှာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစပိန်စကားပြောသူအားလုံးကျောက်တုံးတစ်လုံးရှိတဲ့ငှက်နှစ်ကောင်😉
ရပ်ရွာလူထု၏ဆက်သွယ်မှုအများစုကိုစာပို့စနစ်ဖြင့်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကိုဖတ်ရန်တစ်ရက်လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပြီးစာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အစပိုင်းတွင်သင်နားမလည်နိုင်သော်လည်း၊ ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်ဘာဖြစ်နေသည်ကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်ဟုငါအာမခံသည်။ သင်မသိရှိမီသင်စာရင်းတွင်သင်ရေးသားလိမ့်မည်၊ သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုလူတို့ကမတောင်းမီ (အကယ်၍ သင်ကြိုးစားလျှင် of)
ဤအချက်သည် FOSS စီမံကိန်းတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူ၊ Github၊ Gitlab သို့မဟုတ် Bitbucket သို့မဟုတ် repository code ကိုလက်ခံထားသူမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားရပ်ရွာလူထုတိုးတက်မှုကိုသိသိသာသာကူညီရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
IRC / Gitter / ကြေးနန်း
IRC (Internet Relay Chat) သည်အင်တာနက်အစောပိုင်းကာလများကတည်းကဖြစ်သည်။ WhatsApp နှင့်စမတ်ဖုန်းမတိုင်မီလူများကဤနည်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းစီမံကိန်းများစွာတွင် IRC လိုင်းများရှိသည်။ သင်မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။ စီမံကိန်းသို့မဟုတ်ရပ်ရွာပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စကားပြောနိုင်သည်။
ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် Pull Request မည်သို့အသေးစိတ်ပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြမည်မဟုတ်ပါ။ သင်စတင်ပါ ၀ င်လိုပါကအခြားပို့စ်တစ်ခုတွင်ထားခဲ့ပါမည်။
ပထမတစ်ခုကတော့လုံခြုံရေးချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုထည့်ထားတယ်၊ ဒုတိယဟာအခန်း ၇ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ် git စာအုပ်။ ကျွန်ုပ်သည်စီမံကိန်းနှစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကပင်ပရိုဂရမ်အားလုံးလုံးဘာသာပြန်ဆိုခြင်းပြီးဆုံးခဲ့သည် git စပိန်သို့ (ဗားရှင်း ၂.၁၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်)
၄ င်းတို့သည်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းသေးငယ်သောထည့်ဝင်မှုများဖြစ်ပြီးကုဒ်လိုင်း ၁၀၀ ထက်မပိုပါ (၄ င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်သည်ဖိုင်အသစ်တစ်ခုတွင်ရှိပြီးသားများကိုကူးယူကူးယူရုံသာ) မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် mi စီမံကိန်းအတွက်အထောက်အကူပြု🙂သူတို့ကငါအရာများဖြစ်သည် အသုံး နေ့စဉ်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ ခံစားချက်သည်မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များနေသည် - သင်ဝတ်ဆင်သည့်အရာပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုမြင်ခြင်း၊ သင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလူများစွာကိုသင်ကူညီခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်း! ဒီထက်ကောင်းတာတစ်ခုရှိပါသလား။ 🙂
ငါဒီ post ကိုတိုတိုသိမ်းထားမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်လိမ့်မယ် short ထင်လိမ့်မယ်မတိုဘူး short မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်သင်၏သိလိုစိတ်ကို FOSS စီမံကိန်းများနှင့်စတင်ပူးပေါင်းရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ မကြာမီသင်နေ့စဉ်အသုံးပြုသောအစီအစဉ်များစွာ၌သင်၏ကတိကဝတ်များကိုမြင်တွေ့နိုင်ရန်မကြာမီ - this ဤအရာကိုအလေးပေးပြောကြားခြင်းအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါ။ သို့သော်မည်သူမျှသူတို့မသိသောအရာတစ်ခုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်နားလည်ရမည်။ ထို့ကြောင့်တိုးတက်မှုမပြုမီသိထားရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » Github ပေါ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး PR (Pest Request)
မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေမယ်၊ အတူတူပူးပေါင်းပါ။ ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်သင့်တယ်။ ကောင်းသော post ငါ့သိချင်စိတ် Github ဤလောကသို့ဝင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Cristhiam ကိုပြောပြသည့်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကြိုးစားသင့်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကသင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားမှုရှိမရှိကိုလည်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ (Gentoo ထက်အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်) အမြန်လမ်းညွှန်အနည်းငယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့စတင်မျှဝေနိုင်ပါတယ်😉နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်! ငါ FOSS စီမံကိန်းများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းမပြုမီငါအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပျသောအရာတို့ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကိုသံသယများစွာနဲ့ရှင်းထုတ်ခဲ့တယ်။
ငါ Pull Recuest ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ post ကိုစောင့်နေတယ်။ သမ္မတနိုင်ငံမှနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။ ဒိုမီနီကန်။
မင်္ဂလာပါ Luen မင် your သင့်ရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကပရောဂျက်တွေနဲ့မျှဝေချင်တဲ့အတွက်ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ အဲ့ဒီ့မှာဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကို PR ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်လေးပေးပါလိမ့်မယ်။
ငါ DesdeLinux ကိုတော်တော်များများလိုက်နာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်မှာဒီပို့စ်တွေကစာမျက်နှာကိုတိုးတက်စေတယ်၊ ​​ပျော်စရာကောင်းတဲ့စာဖတ်တာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေတာတွေ၊ ငါ Linuxero ဖြစ်တာကြာပြီ၊ distros တွေတော်တော်များများစမ်းကြည့်ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီမှာသွားတယ်၊ ဗဟုသုတကိုမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jose Aguilar သို့ပြန်သွားပါ
သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစာရေးခြင်းနှင့်ဆက်လက်ပြီးမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်အားများစွာလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏သိုလှောင်ခန်း၌ PR စနစ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်စေသည် !! 🙂
PR ဆိုတာ .. မေးခွန်းတစ်ခုပဲ။
Pull Request (ဘာသာပြန်ကျမ်းကဖော်ပြသည်ကဲ့သို့) သည်အချက်အလက်များကိုဆွဲယူရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Github ကစီမံကိန်းပိုင်ရှင်အား“ ကြည့်ရှုလော့! ငါ၏ repository ၌ငါစီမံကိန်းကိုကူညီပေးသောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်, သင်ရုံကဒီကနေဆွဲထုတ်ဖို့ရှိသည်»။ ဤနည်းအားဖြင့်စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များသည်သင်၏ထည့် ၀ င်ငွေကိုရယူနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းအားကူညီသူတစ် ဦး အဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
၎င်းသည်သေးငယ်သောတိုးတက်မှုများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်နိုင်သည်၊ ကောင်းကင်သည်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်
မင်္ဂလာပါ။ ယခု ပို၍ ရှင်းလင်းလာမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
သင်၏ပထမဆုံး PR ကိုပြုလုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ (Pull Request)